Lacagtii dadka cusub oo meel la saaray | Somaliska
Sidii aan ku soo qoray mowduuc aan soo daabacay bishii hore oo ciwaankiisa ahaa "yaa lacag siinaya dadka cusub?" ayaa waxaa dood ka taagneyd cida bixinaysa qarashka ku baxaya Soomaalida cusub ee hada loo ogolaaday in Sweden ay yimaadaaan. Dowlada ayaa u muuqata mid u dabacday codsiyadii kamuunada iyadoo hada ay soo saartay go'aan sharciga wax looga badalayo. Go'aanka dowlada oo la filayo in lagu soo daro miisaaniyada dowlada ee la soo bandhigayo xiliga dayrta ayaa xaq u siinaya Soomaalida cusub ee reerahooda lala mideynayo in ay la mid noqdaan dadka kale ee cusub ee hada sharciga qaatay. Dadkaan ayaa dowladu waxay lacag ku siin doontaa kamuunada in ay dabaraan qarashka soo dhaweyntooda iyo waxbarashadooda iyadoo sidoo kale dadkaan xaq u heli doonaan in ay ka qeyb qaataan hawlaha xafiiska shaqada iyo taageerada ay helaan dadka cusub ee kale. Arintaan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay kamuunada Sweden oo qaar badan sida Katrineholm ay horey dood weyn uga keeneen sida dowladu wax u rabtay. Dowlada ayaa horey u doonaysay in kamuunadu ay bixiyaan qarashka ku baxaya dadka cusub ee ku soo dega magaaladooda. Kamuunada ayaa ka biyo diiday in lacagta canshuurta ee ay bixiyaan shacabkooda lagu quudiyo Soomaalida cusub. Dadka cusub ayaa waxay fursad u heli doonaan in ay ka mid noqdaan xafiiska shaqada oo ka caawin doona sidii ay shaqo u heli lahaayeen, isla markaana u qaban doono shirkadaha hogaanka u noqonaya ee ka caawinaya waxyaabaha aasaasiga ah ee la xiriira nolosha wadanka.
Sidii aan ku soo qoray mowduuc aan soo daabacay bishii hore oo ciwaankiisa ahaa “yaa lacag siinaya dadka cusub?” ayaa waxaa dood ka taagneyd cida bixinaysa qarashka ku baxaya Soomaalida cusub ee hada loo ogolaaday in Sweden ay yimaadaaan. Dowlada ayaa u muuqata mid u dabacday codsiyadii kamuunada iyadoo hada ay soo saartay go’aan sharciga wax looga badalayo.
Go’aanka dowlada oo la filayo in lagu soo daro miisaaniyada dowlada ee la soo bandhigayo xiliga dayrta ayaa xaq u siinaya Soomaalida cusub ee reerahooda lala mideynayo in ay la mid noqdaan dadka kale ee cusub ee hada sharciga qaatay. Dadkaan ayaa dowladu waxay lacag ku siin doontaa kamuunada in ay dabaraan qarashka soo dhaweyntooda iyo waxbarashadooda iyadoo sidoo kale dadkaan xaq u heli doonaan in ay ka qeyb qaataan hawlaha xafiiska shaqada iyo taageerada ay helaan dadka cusub ee kale.
Arintaan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay kamuunada Sweden oo qaar badan sida Katrineholm ay horey dood weyn uga keeneen sida dowladu wax u rabtay. Dowlada ayaa horey u doonaysay in kamuunadu ay bixiyaan qarashka ku baxaya dadka cusub ee ku soo dega magaaladooda. Kamuunada ayaa ka biyo diiday in lacagta canshuurta ee ay bixiyaan shacabkooda lagu quudiyo Soomaalida cusub.
Dadka cusub ayaa waxay fursad u heli doonaan in ay ka mid noqdaan xafiiska shaqada oo ka caawin doona sidii ay shaqo u heli lahaayeen, isla markaana u qaban doono shirkadaha hogaanka u noqonaya ee ka caawinaya waxyaabaha aasaasiga ah ee la xiriira nolosha wadanka.
Jimcaale Fagersta Ka waran Warkaas wax no dhaama rabnaayee Fagersta ayaa dadki lagu bahdilay paraktik iyo shaqo la’aan
Waa talaabo wanaagsan san sxb Jimcaale Deyrtu ma bilahan sommarka baa ee juni, juli iwn.
assalamu-calaykum mr. jimcaale walaal aniga waxaan imi sweden bil ka hor, waxaana i qaatay KAMUNAHA
walaal jimcaale aniga bil ka hor baan imaaday kamuunaha ayaan i qaaty balse hadda madaama sharci soo baxay jaaniskaa ma helayaaa? in xafiiska shaqadda i qaato?
Dadka la keeni doono ayaa Max.ed laga hadlayaa adiguna waxaad fursad u heleysaa xafiiska shaqada sida uu dadka u qaato caadiyan.
Daayrtu waa xilige? Jimcaale adoo raaliya. huuno mahadsanid
Sareedo waa wixii ka bilowda September.
oo lots yadii ba cirka maraayee yacnii qoloada afku xooglayasha ah ee waxbaan hagna dadaka dhaha xafsika shaqdaan laagta ugaq ata kuwaasaba jaaanis helaya
to,JIMCALE, walaal warkan ma dawlada ayaa sheektay mase waa sadalin oo kaliya hadii jawabtu tahay waa dawlada xageeda waxaan ubaahnaan laheen adoo raliyah meesha aad kasoo xigatay mahadsanit
Deeq warkasta oo Soomaaliga aan ku qore waa war la soo xaqiijiyay oo meel loogu hagaago leh. Warbixintaan dowlada ayaa soo daabacday. Halkaan ka akhriso
jimcaale ma idaacadaad ka dhageysatay walaalkeey
jimcaale 15 bisha idaacada subaxdii waxay sheegeeysay soomaalida arinteeda mana fahmin ee ma dhageysatay adiga ii soo jawaab
asc jimcaale boga sidii hore ayuu xiiso ku lahaa mana qurxoono sida uu hada yahay
Asc wadsalaaman tihiin jimcaale adigoo mahadsan webku sidii hore ayuu ku wanaagsanaa thangs eebow.
Jimcaale waa sida akhyaarta qaar soo qoreen bogga sidan u hadda ma fiicna mar mar lama kala garanaayo inaad mowduuc cusub soo qortay iyo in kale sidii waagii hore ayuu ku fiicana walaal
a s c walal jimcaale adigoo mahadsan baga sidii hor ayy xiisad ku lahaay hada lama fahmi karo in nayuus cusubi ku jiro iyo in kale sida badan marka sidii hore nooga dhig walal adigoo mahadasan
jimcaaloo walaalow bogaan ma fiicna sidii hore ayaa wanaagsan ee naga badal ma nuuraayee
June 20, 2012 at 23:30
Naqshadii hore waxaan uga guuray cilad darteed..naqshadaan cusub wax cilad ah kuma hayo ilaa hada, waana speed fiican tahay balse waan isku dayi doonaa in aan mowduuca cusub kor lagu soo muujiyo.
ASC DHAMANYIIN SUAL JIMCALE. MA I SHEEGI KARTAA SABABTA AD U DANAYSO UN SUALAHA AMA FARIINADA DUMARKA INTA BADAN AYAGA AD UGU JAWABTO.. TIMIR LAAF BA KU JIRTO HADII AD EGTO RAG BADAN AYA FIKRADOODA HALKAN KA DHIBTO LKN WAXAD MODAA INAD ISKA INDHO TIRTO OO LACALA LABO DUMAR HAYDAY WAXKU WEYDIYAAN AD SI FUDUUD UGU JAWABTO . BAL DADOOW ILA EEGA
ASC DHAMANYIIN SUAL JIMCALE.ma ii sheegi kartaa sababta inta badan raga fikradahooda inadan daneyn mise adan ka jawabin ba lkn hadii qof dumar wax kuso weydiiyo ad si dhaqsi ah uguso jawabto . waxa hubal ah inta badan raga aya u badan dadka farimaha so gudbiyo sida hadaba halkan kamuqato lkn adiga wad iska indho tirtaa , marka mala dhihi karaa waxa tahay nin daneyo un dumarka mise iskabulo ba,an aya ku hayso ebow , waxan ku dhihi laha is adkee yanan laga daremin . umada si hufan ula macamil ma,ahan dumarka un inad indho u yelato. waa fikradeyda
FM walaal wa runtaa sida caadiga ah waxaa i qaadanaya xafiiska shaqadda laakiin waxaa la igu dhahay madaama xaaskaaga mudo badan joogto waxaad xaq u yeelaneeysaa in aad la mid noqoto oo KAMUN ku qaato madaama dad sidaa iila mid ahaa oo la dhahay dadkii yimi 2010 ka hor dadkeey keenaan kamun+ka aa qaadanayo inkastoo sida hadda jimcalse aqbaarta ku qoray la badalay sharcigaana aniga jaanis miyaana yeelanayaa jawaab FM IYO JIMCALE KII WAX KA OG
June 22, 2012 at 21:24
TO:- Max,ed Haddii lagu keeney sharcibaan qaatay maxaad u lee dahay,ileyn sharciga qofkii ku keenay oo xaaskaaga ah ayaad ku qaadaneysaaye, warka waad isku qaseysaa walaal, Qofku qofkii keeney siduu yahay ayuu noqonayaa oo meeshii uu ku xiran yahay ayaad KOMMUN,AF,CSN,AMABA SOCIALSTEYLSEN,kula xirnaaneysaa sidaas ayaan jeclahay.!!!